Kanaalka Channel Istanbul Polemics ee Shirweynaha Carta iyo Degmooyinka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraChannel Istanbul Polemics ee Smart Cities iyo Kongareeska Dowladaha Hoose
magaalooyinka caqliga iyo degmooyinka
Guddoomiyaha IMM Ekrem İmamoğlu, Turkey Midowga of Degmooyinka qabtay Ankara at martiqaad ee "Smart Cities iyo Degmooyinka Congress" ku biiray.
Casuumada, IMM, waxaa la siin doonaa abaalmarin shaqadiisii ​​saxiixa, Imamoglu wuxuu abaalmarinta ka heli doonaa gacmihii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Si kastaba ha noqotee, shirweynihii uma socon barnaamijkii lagu sheegay casuumada. Imamoglu iyo maareeyayaasha CHP ee magaalooyinka waaweyni waxay go’aansadeen inaysan sii wadin shirweynaha. Imamoglu ayaa sheegay in uusan ka qeyb gali doonin guddiga, uuna ka jawaabayo su'aalaha saxafiyiinta.
Kahor shirweynaha, wuxuu u soo gudbiyay warqad 4-bog ah Madaxweynaha Recep Tayyip Erdoğan asaga oo codsaday codsi balanta .. Ma jiraan mashaariic ay degmooyinkeena ka diyaariyeen teknolojiyadaha macluumaadka. Kuwan waxaa laga yaaba inay darseen guddiyada xulashada. Waxaan sidoo kale sameynay daraasad kombiyuutar oo aad u khaas ah oo kusaabsan hay'ad tilmaamaysa. Abaalmarinta ayaa la oggolaaday. Degmo kastaa waxay lahayd mashruucyo qiimo leh. Laakiin khiyaanada casuumadda naloo soo diray waa: 'Waxaan aad u jecel nahay inaan ka qeybgalno. Waa inaad annaga noo qiimo leedahay. Sababta oo ah Madaxweynaheena ayaa ku siin doona abaalmarinta oo soo bandhigi doona. Waxaan rabnaa inaad kaqeyb gasho dood cilmiyeed halkaas oo aan kaqeyb qaadan doonno fikradahaaga gaar ahaan warfaafinta, teknolojiyadda sare iyo magaalooyin caqli badan. ' Waxaan dhamaanteen isku daynay inaan naxariis iyo naxariis lahayn si ay noogu soo biiraan halkan. Laakiin howsha waxaa lagu maareeyay cilmi-nafsi kala duwan oo 180 ah. Markale, kuwa yiraahda waa kooxda martida u ah TBB. ”
Ekrem İmamoğlu, Madaxweynaha Magaalada Istanbul Magaalo Weyn (IMM), wuxuu ka qeybgalay “Smart Cities and Assembly Municipal Congress düzenlen oo lagu qabtay Ankara. Kahor dhacdada lagu qabtay Congresium Zeugma Hall ee Rugta Ganacsiga ee Ankara (ATO), İBB laxiriira oo lagu aasaasay isla goobtan ayaa booqday istaaga. Duqa Magaalada İzmir Tunç Soyer wuxuu booqday İmamoğlu oo ku yaal IMM. Muwaadiniinta, iyadoo labadoodaba madaxweynaha uu muujiyey xiisaha weyn ee sawirrada la qaaday. Muwaadiniinta qaarkood, ehelka, Imamoglu waxay la kulmeen taleefannada gacanta iyagoo fiidiyoowga ah. Erdoğan wuxuu gooyay furitaankii munaasabaddii furitaanka. Imamoglu, oo baqshad siiyay Erdoğan, oo dhinac dhinac u yimid intii lagu gudajiray goynta, ayaa gacan qaaday saaxiibkiis Binali Yıldırım doorashadii Istanbul. Erdoğan ayaa khudbaddii furitaanka ka jeediyay shirweynaha. Imamoğlu, ka dib furitaankii shirweynaha, Duqa Magaalada Ankara Metropolitan Mayor Mansur Yavaş, Duqa Magaalada icipzmir Metropolitan Tunç Soyer, Duqa Magaalada Adna Metropolitan Zeydan Karalar, Eskişehir Duqa Magaalada Metro Yılmaz Büyükerşen, Antalya Metropolitan Municipality Mayor Mayor Munhittin Burte Mog camerasn Mogedt .
"MAALIN MAAL AYAA MAANTA"
Su’aasha ugu horeysa ee la weydiiyay Imamoglu waxay ahayd, aslında Xaqiiqdii, Wasiirka iyo Madaxweynaha si toos ah magac umay bixin, laakiin Kanal Istanbul ayaa bartilmaameedkoodu ahaa. Sideed u qiimeyn kartaa wada hadalka gudaha ”. Imamoglu ayaa uga jawaabay su'aashan:
Sanırım Waxaan u maleynayaa inaad ogtahay kulanka aan maanta ku jirno. Ururka Dawladaha hoose ee dalka Turkiga (TBB) diyaariyey oo si gaar ah qaybsiga mashaariic khuseeya hormarsataan by degmooyinka la technology sare oo soo bandhigay carwo. Ku lifaaqan waa khudbad uu Madaxweynahayaga noo salaami doono. Duqa magaalada TBB, Mrs Duqa magaalada Gaziantep Fatma Hanım, ayaa wacday qalinka gaarka ah waxayna tiri in badhasaabyada kale ee aniga oo kale ah la siin doono abaalmarin iyo in Madaxweynaha Jamhuuriyadda uu abaalmarinnadaas siin doono. Waxaan danaynay inaan ku soo biirno halkan. sababta; Kuwa aan aqoon, TBB ayaa leh annaga. Taasi waa urur maamula lacag ka miisaaniyadda ee degmooyinka dalka Turkiga jarida. Dabcan, saaxiibbadaani waxay la shaqeynayaan miisaaniyad degmooyinka ay ka kooban yihiin darajo sare sida TBB, gaar ahaan Istanbul, Ankara, Izmir, Adana iyo Mersin. Laakiin maanta, nasiib-darro, waxay ahayd maalin aan nasasho lahayn. Halkaan waxaa ku yaal dhammaan degmooyinka. Sida aan mar walba ka muujiyeen wasiirada ee Turkey, qoondeeyey wasiir haysta in ay sameeyaan waajibaadkooda. Tusaale ahaan, hadalka farsamada sare. Waxaan moodayay in Wasiirka Teknolojiyadda la xidhiidha teknolojiyadda casriga ah ee la xidhiidha IT-da la sii deyn doono, sharxi doono sababta ay ugu dhacday khasaare dhan 107 bilyan oo doolar shantii sano ee la soo dhaafay, sababta ay farqiga u dhexeeya dhoofinta iyo soo dejintu u yahay 107 bilyan oo doollar, waxaan dhihi doonaa waxaan u baahan nahay inaan si wadajir ah ganacsi uga wada samayno. odhan doona. Ma uusan dhihin taasi. Wasiirka Tiknoolajiyadda ayaa ka hadlay biyo-mareen kasta oo ay ahayd inay wax ka qabato. Markaa, Wasiirka Magaaladan .. Waxaas oo dhan waa khalad oo kama qayb galno qaab. Sidii aan u idhi, waxay ahayd maalin naxariis darro. Waxaa intaa dheer, dabcan, waxaan ka wada hadli karnaa kanaalada. Waxaan rabnaa. Intaa waxaa sii dheer, waxaan dhowr jeer weyddiiyey, 'Ina keena, aynu bandhigno, Mudane Madaxweyne'. Aniga ahaan, waqtiga ugu qaalisan maanta waa inaan iyaga siiyo warqaddayda afarta bog ah oo aan dib ugu cusbooneysiiyay codsigeyga. Intii aan arki karay, khudbadda Wasiirka waxay u weecisay dhanka warqadayda markii uu akhrinaayay. Saaxiibbaday way digeen. ”
AMAAN waxaan codsanayaa XUQUUQDA AQBALKA ”
“Nuxurku waa; Maalmihii la soo dhaafay, gaar ahaan iskudayada wasiirradu ay ku maareeyaan habsami u socodka howlaha iyagoo adeegsanaya hadalo been abuur ah, maalin maalmaha ka mid ah waxay dhaheen maalinta ku xigta, 'Imamoglu wuxuu joojiyay tareenka dhulka hoostiisa mara. Ma jiraan wax hawl ah oo shirqool ah. Dhibaato biyo kuma lihin. Melen Dam dhib malahan 'wuxuu yiri, Mudane Madaxweyne, waxay bixiyeen macluumaad qaldan, waxaan rabaa inaan siiyo warbixin kooban oo aan muujiyey. Waxaan u maleynayaa: Waxaan ahay duqa 16 milyan oo qof. Mudane Madaxweyne, wadankeena kale wuxuu la joogaa qoyskiisa. Waxaan ahay duqa magaalada ugu qiimaha badan, magaalada ugu weyn. Marka sidaas ayaan u doonayaa xuquuqdan, waan doonayaa, waan rabaa. Taas waxaan Madaxweynaha u siiyay qoraal ahaan. Waxaan filayaa inay casuumadani tahay damiirkooda iyo cadaaladdooda. Waxaan rajeynayaa inay dhowaan dhaceyso. Dhibaato kale ayaa jirta. Xusuusnow in 30 badhasaab oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ay kulan yeesheen 4 bilood ka hor, maalmihii ugu horreeyay ee Sebtember. Kulankaan ayaa naloo balan qaaday. Iyada oo la raacayo ajendaha soo jeedintayada, Mudane Madaxweynuhu wuxuu yiri: 'Sharciga ku saabsan degmooyinka in laga wada hadlo lagana hadlo waxa komishan la dhisi doono.' Isagaa dhigay magacyada laftiisa. Duqa Magaalada Ankara ee Caasimadda Mansur Yavaş iyo Duqa Magaalada Eskişehir walaalkeen Yılmaz Büyükerşen iyo badhasaabyada Xisbiga Xisbiga AK ayaa tiriyay magacayga waxayna magacaabeen 6 wasiir. Kadib wuxuu aaminay Madaxweyne ku xigeenka Fuat Bey. Qof kasta waa inuu lahaadaa fikrad. Maxaynu uga walaacnay kaqeybgalka? Tani waxay ahayd ceeb kale oo maanta dhacday. Waan ka xumahay inaan maqlo, waxaan dareemay xijaab. Maanta, nasiibdarro, way xumaatay. TBB-du waxay diyaarisay maalin lama huraan ah. Waxaan taas ugu dhawaaqayaa Fatma Hanım. Si wanaagsan ayaan u naqaan isaga. Bal aan sidoo kale caddeeyo. Ma aqaan cidda qalad ah, laakiin isagaa jawaab noogu leh. 6-7 degmo ayaa bixiya qeybta ugu badan ee miisaaniyada. Miisaaniyaddayadu waa jirtaa. Waxaa jira qaar wareejin ah oo loo wareejiyay degmooyinka u baahan. Taas oo ay tahay in la sameeyo. Laakiin midkeenna kuma faraxsana wixii aan maanta haysanno. Waxaan soo aragnay khibrad xun - waxaan ku hadlayaa dhamaan degmooyinka - inaan noqdo badhasaabyada maxalliga ah.
Waxaan qabtaa shaqooyin badan oo igu sugaya Istanbul ”
Imamoglu, su’aasha ah haddii ay sii socon doonaan kulanka, “Annaga ahaan, kulanka ayaa dhammaaday. Looma baahna. Ka fikir, Waan kuu sheegayaa waxa. Haddii ajandaha uu yahay ajendaha subaxa hore, waxaan u baxaa inaan kala dhexgalo arimahooda. Qaabkaas ma lihin. Waxaan hayaa shaqo badan oo igu sugaya Istanbul. Wuxuu haystaa shaqo badan oo sugaya asxaabtayda magaaladooda. Duqa Magaalada Ankara ee Magaalo Weyn, albaabkaan, wuxuu xallin doonaa 100 shaqo. Ajandeheenu aad ayey u mashquulsan yihiin. Meeshani waxay naga dhigaysaa wax aan waxtar lahayn maanta oo keliya. Ma rabno .. Su’aal kale oo la weydiiyay Imamoglu waxay ahayd “Waxaad sheegtay inaad dirtay warqad ku saabsan Istanbul. Uma maleynayo inay warqad ku qoran tahay Kanal Istanbul kaliya. Mawduuc ayaa jira in lagu daro qorshaha maalgashiga ee laymanka metrooga. Faahfaahin ma ku saabsan kuwan ”. Imamoglu, su'aashan, "Waxaa jira wakhti qaldan. Kuma jiraan qorshaha maalgashiga. Kadib qorshihii maal gashigu wuxuu u aaday qasnadda. Ansixinta ayaa la codsan doonaa. Taasi waa waxa aan hadda rabno. Maadaama aan lagu darin qorshaha maalgashiga, ma jiro ajande khasnadeed. Ma jiraan wax la karinayo. Micno malahan raadinta wax halkaas ka jira. Waxaan sugaya. Haddii ay i casumaan, taas oo aan aad u doonayo, Mudane Madaxweyne wuxuu leeyahay muwaadin kasta oo ku nool 82 milyan, wuxuu igu leeyahay 1 milyan jeer. Sababta oo ah waxaan weydiisanayaa 16 milyan oo qof in ay ballan yeeshaan. Waxaan rabaa casuumadan anigoo daacad ah, damiirkeyga iyo degmadaba. Waxaan soo gaarsiiyay dhammaan dareennadaas. In kasta oo ay jiraan wax kasta, waxaan rajaynayaa jawaab wanaagsan ”.
Imamoglu wuxuu yidhi, "Waxaa jiray go'aan ku saabsan Cemevleri oo ka socda Golaha Deegaanka Izmir. Hadaanan khaldin, waxay ku jirtay mashaariicdaada. Waxaad sheegtay inaan wax badan qabanay. Goormaad ku talojirtaa inaad mashruucan u keento ajendaha? Malaha waad seegtay. Waxaa la soo saaray Isniinta oo loo diray komishanka. Sida ku xusan go'aanka Guddiga, waxaan u maleynayaa inaan kulanno berri, Khamiista. Waxaan rajeynayaa in go'aankan cibaadada muwadiniinteenna Alevi ee dalkan loo qaado si mideysan oo damiirka dadka oo dhan. Annagu go'aan kama gaari karno cidda u adeegsaneysa goob cibaado. Tani waxay lagama maarmaan u tahay damiirka malaayiinta muwaadiniinta Alevi. Waxaa saaran guddiga hadda. Waxaan u rajeynayaa dhamaan xisbiyadeena ku sugan dalka IOM inay go’aansadaan siyaasadan marka laga reebo, damiirkooda, akhlaaqda iyo aaminsanaanta cadaaladda. Waxaan rajeynayaa in jawaabta togan ay jiri doonto toddobaadkan ”.
"WAA INAAN KA QAYBGALAYNAYNAYNAYNAYNAYNAYNAYNAYNTA BOOQASHADAADA"
İmamoğlu wuxuu yidhi, "Waxaad sheegtay in abaalmarin la bixin doono. Waa maxay abaalmarintaan?
Var Waxaa jira mashruucyo ay degmadu diyaarisay oo ku saabsan teknolojiyada macluumaadka. Kuwan waxaa laga yaaba inay darseen guddiyada xulashada. Waxaan sidoo kale sameynay daraasad kombiyuutar oo aad u khaas ah oo kusaabsan hay'ad tilmaamaysa. Abaalmarinta ayaa la oggolaaday. Degmo kastaa waxay lahayd mashruucyo qiimo leh. Laakiin khiyaanada casuumadda naloo soo diray waa: 'Waxaan aad u jecel nahay inaan ka qeybgalno. Waa inaad annaga noo qiimo leedahay. Sababta oo ah Madaxweynaheena ayaa ku siin doona abaalmarinta oo soo bandhigi doona. Waxaan rabnaa inaad kaqeyb gasho dood cilmiyeed halkaas oo aan kaqeyb qaadan doonno fikradahaaga gaar ahaan warfaafinta, teknolojiyadda sare iyo magaalooyin caqli badan. ' Waxaan dhamaanteen isku daynay inaan naxariis iyo naxariis lahayn si ay noogu soo biiraan halkan. Laakiin howsha waxaa lagu maareeyay cilmi-nafsi kala duwan oo 180 ah. Markale, kuwa dhaha waa kooxda rasmiga ah ee UMT. ”